खोई अख्तियारको एक्शन ? – esetokhari.com
खोई अख्तियारको एक्शन ?
‘अमर÷सिस्ने जेभी’ निर्माण कम्पनीको चरम लापरवाही, जनप्रतिनिधी कमिशनको चक्करमा, कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न माग
२०७८ भाद्र ७, सोमबार १६:१५
नेपालगन्ज : कुनैपनि सडक कालोपत्रे गरिएपछि कम्तीमा दुई–चार वर्ष टिक्छ भन्ने विश्वास रहि आएको छ । तर, बाँकेका अधिकाशं सडक निर्माण भएको ६ महिनामै जीर्ण बन्दै गएका छन । यसले सडक निर्माणको गुणस्तरता माथि प्रश्न उब्जाएको छ ।
ठेकेदार कम्पनीले कम गुणस्तरको काम गरेकाले कालोपत्रे गरेको दुई महिनापछि नै सडक भत्किन सुरु भएका छन ।कालोपत्रे गरेको सडक महिना दिनमै भत्किएपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका छन् । उनीहरूले सडक गुणस्तरीय निर्माण गर्न माग समेत गरेका छन् ।
ठेकेदार कम्पनी ‘अमर÷सिस्ने जेभी’ ले निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको उक्त सडक एक महिनामै भत्किएको स्थानीय बताउँछन । एक त साँघुरो सडक, त्यसमा पनि ‘कमसल’ निर्माण भएका कारण कालोपत्रे सडक एक महिनामै भत्किएको स्थानीय लक्षिराम काँदू बताउँछन् ।
सधैं धुलाम्मे र हिलाम्मे हुने सडक कालोपत्रे हुँदा खुसी भएका थियौं, तर, बाटो कालोपत्रे भएको महिनादिनमै ठाँउ–ठाँउमा उप्किन थाल्यो, भासिन थाल्यो’ यसको गुणस्तरमाथी प्रश्न गर्दै उनले भने ‘जनताको आँखामा छारो हाल्न मात्रै बनेको रहेछ, महिनानिद पनि राम्ररी टिकेन ।’
सडक निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको स्थानीयको आरोप छ । जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर–६ डिठ्ठापुरका स्थानीय विजयसिंह चौहानले कालोपत्रे गर्ने क्रममै चरम लापरबाही भएको बताए ।
हिलाम्मे र धुलाम्मे सडकबाट छुटकारा पाउँदै कालोपत्रे बन्नेमा खुशी बनेका हामी सडक निर्माणमा भएको अनियमितता र गुणस्तरहीन कार्यले पहिलेकै सडक राम्रो लाग्न थालेकोछ ।’ उनले अगाडी थपे–‘सडकको चौडाई पनि छैन । साँघुरो सडकमा गाडी आए सडकबाट तल आफ्नो गाडी झार्नुपर्छ अनिमात्र सडक खुल्छ ।’
चौहानका अनुसार साँघुरो र भत्किएको सडकका कारण दिनहुँ सडक दुर्घटना हुने र ट्राफिक जाम लाग्ने गर्दछ । गाउँपालिकाले पहिलो चरणमा गतवर्ष उक्त सडकमा माटो पटान, ग्राभेल, नाला र कल्र्भट निर्माण लगायत काम गर्न करिब सवा ८ करोड खर्च गरेको थियो ।
दोस्रो चरणमा यस पटक कालोपत्रे मात्रै गर्न ठेकेदारसँग मुअकर र पिएससहित ४ करोड ६१ लाख ५१ हजार ५ सय ७९ रुपैयाँ २५ पैसामा ठेक्का सम्झौता गरिएको छ ।
दोस्रो चरण अन्र्तगत २०७७ माघ २५ गते भएको सम्झौताको म्याद २०७८ फागुन १ गते सकिनेछ ।
कालोपत्रे भएको एक महिनामै सडकका करिब दर्जनबढी ठाउँमा भास्सिने, भत्किने र चर्किएको छ । साविक गनापुर गाविसका पुर्वअध्यक्ष दुखिराम लोनियाले पिप्रहवादेखी खजुरा जोड्ने ‘बाईपास’ सडक निर्माणको काममा अनियमितता भएको बताउँछन् ।
यो सब कमिशनको खेल हो । बजेट दुरुपयोग भएको देखिएको छ । आम जनतालाई कति बजेट कहाँबाट आयो र कहाँ खर्च भइरहेकोछ जानकारी समेत छैन ।
जानकी गाउँपालिकाका ईन्जिनियर प्रजेश आलेले सडक गुणस्तरहीन नभएको दाबी गरेका छन । ईन्जिनियर आलेका अनुसार सम्झौता अनुसार ठेकेदार कम्पनीले चार मिटर चौडाईको सडकमा २ ईन्च गहिराईमा कालोपत्रे गर्नुपर्छ । कालोपत्रेको काम ठेकेदारले सम्झौता अनुसार नै गरेको उनको दाबी छ ।
गाउँपालिकाको आन्तरिक बजेटबाट दुई चरणमा निर्माण भइरहेको सडकमा पहिलो चरणमा खड्का निर्माण कम्पनीले र दोस्रो चरणमा सिस्ने जेभीले उक्त सडक निमार्ण गरिरहेका छन ।